राष्ट्र बैकमा गुनासो ओइरोः रेमिट्यान्स पाएनौँ, चेक क्लियरिङ भएन ? « Aarthik Sanjal राष्ट्र बैकमा गुनासो ओइरोः रेमिट्यान्स पाएनौँ, चेक क्लियरिङ भएन ? – Aarthik Sanjal
राष्ट्र बैकमा गुनासो ओइरोः रेमिट्यान्स पाएनौँ, चेक क्लियरिङ भएन ?
१३ चैत्र २०७६, बिहीबार १३:५५
काठमाडौं । लकडाउन पछि वित्तीय क्षेत्रमा नियमित हुनुपर्ने कार्य सम्पादन हुन नसक्दा राष्ट्र बैकमा गुनासाहरू ओइरिन थालेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत ११ गते सोमबारदेखि चैत १८ गते मंगलबारसम्म देश नै लकडाउन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले दिने सेवा नियमित हुन नसकेपछि यस्तो गुनासो आएको राष्ट्र बैंकका कायममुकाय गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।